Akhri:-Kulan Maanta Muqdisho Ka Dhacay Oo Looga Hadlay Arrimo Dhowr Ah + Sawirro * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Akhri:-Kulan Maanta Muqdisho Ka Dhacay Oo Looga Hadlay Arrimo Dhowr Ah + Sawirro
By Xuseen Axmed	 On Jul 25, 2017
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa shir guddoomiyey kulanka guddiga amniga Badaha, kaas oo looga hadlayay arrimo dhowr ah oo la xiriira badaheena.
Guddigan oo loo sameeyey in xiriir joogto ah la yeeshaan hay’adaha kala duwan ee dawladda kuwaas oo ka shaqeeya arrimaha badda ayaa bishii hal-mar kulan ku yeesha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Dhanka kale Wasiirka ayaa sheegay in kulankan uu hor-u-dhac u yahay shir kale oo ka dhici doona dalka Uganda, oo looga hadlayo amniga baddaha Soomaaliya, kasoo ay ka qayb galayaan dhammaan maamul Goboleedyada iyo madax ka socota dawladda dhaxe.
Sidoo kalena waxaa lagu marti qaaday beesha caalamka sidii ay hay’addaha dhaqaalaha bixiya u taageeri lahaayeen qaabka loo sugayo amniga dalka iyo kan badaha Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo Oo Warqadaha Aqoonsiga Ka Gudoomay Safiir Cusub + Sawirro